စိတ်ဝင်စားစရာ မြန်မာမုန့် (၅)မျိုး - LODGGY
မြန်မာတွေကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ အစားအစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အပြင် ထမင်းစားချိန် တွေ ကြားမှာဖြစ်ဖြစ် အဆာပြေ ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားရည်စာအမျိုးမျိုးကို စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒေသအလိုက် အစားအစာ များ ကွဲပြားသည့်အပြင် ‌ဒေသအလိုက် သွားရည်စာများလဲ ကွဲပြားပါတယ်။ သွားရည်စာတွေကို အဆာပြေတင်မကပဲ အလှုအတန်းများ၊ ဧည့်သည်ဆောင်သည်များကို တည်ခင်းဧည့်ခံ လေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာမုန့်အတွေအများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အစားအသောက် (၅) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
မုန့်ဝမ်းသာ (By dawei University Library)
ထားဝယ်ဘက်က အဆာပြေစားစရာ အချိုမုန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မုန့်ဝမ်းသာခေါ် မုန့်သည် ကောက်ညှင်း မုန့်လုံးကလေးများတွင် ပေါက်ပေါက်ပါသော အုန်းယိုဌာပနာ၍ စားသည့်အခါ အုန်းသီးမှုန့် ဖြူးစားကြတဲ့ မုန့်တစ်ခုပါ။
ခနုံထုပ် (By Pheonix06)
မန္တလေးမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မန္တလေးစာ တစ်ခုပါ။ မြန်မာ့သမိုင်းတွေအရ ၁၂၂၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မန္တလေး ရတနာပုံနေပြည်တော် မှာ ရှိတဲ့ ယိုးဒယားဝင်း (လက်ရှိ မန္တလေးမြို့ (၂၉ ) လမ်းနှင့် လမ်း (၃၀) ကြား ၊ (၈၁) လမ်းနှင့် (၈၂) လမ်းကြား) ကနေ စတင်ပေါ်‌ပေါက်လာတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ကြက်သားကို ကို အဆာပလာများနယ်ပြီး ကြက်ဥ/ဘဲဥ ကျော်လိပ်ထဲမှာ အစာသွပ်ထားတဲ့ မုန့်တစ်မျိုးပါ။
ခေါပျဥ် (By MyanmarCookinglearn)
ခေါပျဥ်သည် ကောက်ညှင်းပေါင်းအဖြူကို ကြေညက် စေးပိုင်အောင် ထောင်း၍ ဗန်းတခု၌ အပျဉ်ကြီး ဖြစ်အောင် ဖြန့် နှမ်း ထောင်း၊ အုန်းသီးမှုန့် နိုင်နိုင်ဖြင့် စားကြတဲ့မုန့်တစ်မျိုးပါ။ ရှမ်းလူမျိုးတို့သည် ခေါပျဉ်ကို နေဖြင့် အခြောက်လှန်း၍ စားလိုသောအခါ ဆီဖြင့် ကြော်စား၏။ သို့မဟုတ် မီးကင်၍လည်းစားသည်။ ထိုခေါပျဉ်ခြောက်များကို ခေါပုပ် ဟုလည်းခေါ်သည်။
မုန့်ရေပါး ခေါ် ‌ရေမုန့် (By Lionslayer)
ဘုရားပွဲဈေးတွေများ အမြဲလိုလိုတွေ့ရတတ်တဲ့ မုန့်ရေပါး လို့ လူသိများတဲ့ ရေမုန့် ကတော့ အညာ‌ဒေသဘက်က မုန့်တစ်မျိုးပါ။ ဆန်မှုန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး အချို့တွေက ချွေတာရေးမုန့်လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ မုန့်ထဲကို ပဲ၊ကြက်သွန်မိတ် စတာတွေ ထည့်ပြီး စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ခဲလံကျည်တောက် (by Sai Htun Lin)
ခဲလံကျည်တောက် ကို ကောက်ညှင်းကျည်တောက် လို့ အသိများကြပြီး မြန်မာမှာ အလွန်ထင်ရှား၍ လူအများ စားသုံးသောမုန့် ဖြစ်သည်။ ဝါးတင်း ဝါးကျည်တောက်ထဲသို့ ကောက်ညှင်းဆန်ထည့်ပြီးပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်များအားဆေး၊ ကျည်တောက်ထဲထည့် ရေထည့်ပိတ်ခါ မီးဖြင့်ကျက်အောင်ဖုတ်ရတာြဖစ်ပါတယ်။ အုန်းသီး၊ သကြားများဖြင့် တွဲဖက်စားကြပြီး ဘုရားပွဲဈေးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ မုန့်တစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…. ယူတို့အတွက်ရော ဒီမုန့်တွေအပြင် အကြိုက်ဆုံးမုန့်တစ်ခုက ဘာများဖြစ်မလဲ?????